Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Japon » Tsy misy fimamoana amin'ny lalao: tsy misy alikaola ny Lalao Olaimpika ao Tokyo
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • culinary • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Japon • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Toa nivadika ny drafitra teo aloha ny tompon'andraikitra amin'ny Lalao Olaimpika ao Tokyo mba hamelana ireo mpivarotra zava-pisotro misy alikaola ho an'ny mpijery amin'ny toerana misy ny fifaninanana.
Nikasa ny hamela ny fivarotana zava-pisotro misy alikaola amin'ny toerana Olaimpika ireo mpikarakara ny Lalao Olaimpika Tokyo.
Torolàlana iray momba ny mpijery ny Lalao Olaimpika ao Tokyo, manomboka amin'ny 23 Jolay, no haseho amin'ny faran'ity herinandro ity.
Ny fandraràna zava-pisotro misy alikaola dia azo raràna any amin'ny toerana Olaimpika.
The Lalao Olaimpika Tokyo 2020 Nikasa ny hamela ny fivarotana zava-pisotro misy alikaola any amin'ny tranokala Olaimpika ny mpikarakara tamin'ny voalohany, miaraka amina fetra sasany, satria miomana amin'ny fanombohan'ny lalao ao anatin'ny iray volana ny renivohitra Japoney.
Saingy rehefa nihalehibe ny feo raha tsy nisy fiheverana ireo mpanohana toa ny Asahi Breweries, dia toa nivadika drafitra teo aloha ny tompon'andraikitra amin'ny Lalao mba hamelana ny fivarotana zava-pisotro misy alikaola ho an'ny mpijery amin'ny toerana anaovana fifaninanana.
"Raha jerena ny mampiavaka ny hetsika, ny komity mpikarakara dia handinika fa misy ny mpandray anjara", hoy ny minisitry ny Olaimpika, Tamayo Marukawa, omaly maraina tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety.
Torolàlana iray momba ny mpijery ny Lalao Olaimpika ao Tokyo, manomboka amin'ny 23 Jolay, no haseho amin'ny faran'ity herinandro ity. Ao anatin'ny volavolan-keviny, ny mpikarakara dia mangataka amin'ny mpijery mba tsy hihinana sy hisotro amina vondrona amin'ny làlan-kaleha eny an-toerana, ary hivezivezy mivantana sy hivoaka amin'ny toerana tsy mijanona na aiza na aiza, ho ampahany amin'ny fepetra hampihenana ny mety hisian'ny fiparitahan'ny COVID-19
Seiko Hashimoto, filohan'ny komity mpikarakara ny lalao, dia nilaza fa omaly dia «dinihina» ny fivarotana zava-pisotro misy alikaola nefa miankina amin'ny mety hanakanana ny olona tsy hiteny mafy na hiakiaka ary raha afaka mitandrina ny protokol fiarovana izy ireo rehefa mifindra ao anatiny ny toerana.
Ny lalàna izay napetraka ho an'ny besinimaro any Japon amin'izao fotoana izao dia hanjary handinika ihany koa raha azo amidy ny zava-pisotro toy izany, hoy izy.
Saingy ny depiote sasany sy ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana dia naneho ny ahiahiny momba ny fivarotana alikaola any an-toerana raha sahirana ny firenena hanafainganana ny vaksinin'ny COVID-19, ary ireo orinasa any Tokyo dia miady amin'ny famerana ny alikaola.
Ny filohan'ny Fikambanan'ny mpitsabo ao Tokyo dia nilaza tamin'ny valandresaka nifanaovany fa tiany ny mpikarakara «mieritreritra» ny drafitra dinihina mba hamelana ny mpijery misotro toaka, ary ny fivarotana zava-pisotro misy alikaola dia tsy tokony avela eny amin'ny toerana olympika.
Ny alatsinainy teo dia nanapa-kevitra ny mpikarakara fa ny toerana dia azo fenoina hatramin'ny 50 isan-jaton'ny fahaiza-manao, hatramin'ny mpijery 10,000 farafahakeliny, taorian'ny dinika nandritra ny volana maro momba ny satrok'isan'ny mpankafy ao an-toerana. Ireo mpijery avy any ampitan-dranomasina dia efa voarara.